Odokotela babe nakho omkhulu futhi ngokuqinisekile kudingeka wazi indlela yokuphila ukuphila isikhathi eside ngenjabulo. Nalu uhlu imikhiqizo abakhona kule odokotela Ukudla. Zama ukufaka nabo ekudleni kwakho.
Odokotela ozama badle inyama kancane futhi ukwakha ekudleni kwakho plant. Noma kunjalo, ngenxa imikhiqizo lezilwane ungalahli itewu amaqanda, ngoba awumthombo okahle wamaprotheni.
Tofu - okunye okukhulu imithombo semifino of amaprotheni ezifana turkey noma inkukhu. Amaphrotheni akuyona kuphela wusizo kwemisipha ukukhula, futhi unalo Kumqoka kakhulu impilo ubuchopho kanye nokusebenza kwawo okuvamile.
Fish kufanele avele njalo kuthebula yakho, futhi le njongo eziningi izizathu ezinhle. Fish ezifana salmon uyasondla ngobuchopho inhliziyo, ukugcwalisa umzimba nge okunamafutha nenzuzo acid Omega-3.
Apple - lokhu kuyinto izithelo ezinhle kangaka ekahle isidlo. Ungakwazi kalula ukwanelisa nalo ngokuhlasela indlala.
amajikijolo Antioxidant-ocebile like aluhlaza okwesibhakabhaka kufanele avele njalo ekudleni. ukudla okunjalo kukunika impilo nobuhle esikhumbeni, futhi kunciphisa amathuba nomdlavuza ngoba isiza kanjani ukulwa radicals khulula.
Esikhundleni kokuqeda yakho dessert usuku amnandi, igcwele ushukela, zithokozise le-raspberry engcono. I-raspberry nesishiyagalombili amagremu fibre inkomishi ngamunye, ngaphandle-ke kahle kuyasiza ulwa izifiso imithamo amnandi futhi unomphela, okubangela umuzwa satiety.
Zama ukwengeza imifino kanye ukwatapheya kunoma iyiphi isidlo lapho kungafaneleka. Ukwatapheya eziningi monounsaturated amafutha, okuyinto ukunciphisa izinga cholesterol elimazayo. Nokho, kufanele sikhumbule njengoba ukwatapheya izingxenyana ezincane.
Spinach kuyinto kilojoule, futhi liwumthombo okahle uvithamini A, okuyinto edingekayo ukuze izinwele enempilo futhi isikhumba. Engeza isipinashi ukuba nemifino izitsha ngomthombo ephansi fat wamaprotheni - kwadingeka dinner omangalisayo, egcwele izakhamzimba.
Amakhowe ngokuvamile avele odokotela Ukudla. Lena kwalokho ezinhle nemifino izitsha. Amakhowe amavithamini amaningi B, ezisiza umzimba ukuze uthole amandla ekudleni, plus zishukumisa kumiswa kwamangqamuzana egazi abomvu.
Ngokuvamile, i-onion kubhekwa indlela elihle lokukhiqiza ukunambitheka izitsha, kodwa futhi sisinika ezinhle kavithamini C. Lo vithamini kusiza ukulwa radicals khulula futhi kunciphisa amathuba nomdlavuza. Njalo ukwengeza anyanisi e eyosiwe yabo zemifino.
Zama ukudla olinganiselayo futhi kukhona inala imifino - ngakho odokotela batusa ukwenza. Broccoli - zemifino ukuthi uphelele kokuthola izakhi ezidingekayo.
Ukudla nezimfanzi kuzokusiza ukwandisa ezingeni amaprotheni eyanele ngaphandle umzamo othe xaxa. Ngaphezu izimfanzi kilojoule ezimbalwa kakhulu, kodwa amaprotheni - Twenty amagremu ingxenye encane.
Pheka ke ukuze umbhangqwana, amakhekhe noma ukwenza kwayo amazambane ecubuziwe. Kunoma ikuphi ukholifulawa is a Ngaphezu enkulu ekudleni kwakho, ngoba iphakeme kakhulu fibre. It ikhuthaza ukugaya enempilo.
Ukudla okune-amafutha enempilo, kukhona usizo ikakhulukazi izinwele. Ngokwesibonelo, ama-alimondi - nje akudle ngaphandle usawoti! nati Unsalted - lena kukho olukhulu isidlo ewusizo.
Salad nge inkukhu on the hlupha
Uma endaweni ukudla okusheshayo yokudlela, zama ukukhetha into efana isaladi nge inkukhu. Lokhu kuzokuvumela ukuba ugweme spikes emazingeni igazi glucose. Ngaphezu kwalokho, inkukhu - siwumthombo omuhle kakhulu amaprotheni ngaphandle kilojoule extra.
Ungesabi ukudla amaqanda sisonke, kodwa amaqanda qanda zinhle ikakhulukazi. Lokhu omelet ligcwele amaprotheni!
Lonke okusanhlamvu imiqulu
Ungakwazi sihlanganise amaprotheni yakho omelet nemifino yonke kakolweni i-tortilla. Ukusetshenziswa okusanhlamvu lonke ekuseni kukusiza ukuba ugcwalise umzimba amandla ngcono ukugaya ngenxa yokuqukethwe eliphezulu fibre.
Gcina umbhalo walokho ezingeni ushukela kule usoso silinganisela irayisi, okunye okufanele ungesabi sushi. Lena inketho ezinhle kwasemini okunempilo, egcwele amafutha enempilo kanye amaprotheni.
Izaqathi ne hummus - kuba inhlanganisela ephelele isidlo. Happy crunching izaqathe kanye kunikeza umzimba nge umthamo eliphezulu-beta-carotene.
Isithako esemqoka yalolu isidlo - chickpeas. Ngakho-ke, hummus kuyinto awumthombo okahle wamaprotheni yemifino kanye kusiza ukuzizwa satiety, futhi inikeza esitebeleni izinga likashukela egazini.
Ushizi izinti - isidlo esikhulu. Sebevele ihlukaniswe izingxenye, ngaphezu kwalokho, ukuze ukwazi ukwandisa ezingeni iphrotheni indlela odla ngayo.
Uma kufaneleka, zama ukuze ungeze izitsha ukhari turmeric. Lokhu kuwusizo kakhulu esikhumbeni, ngaphandle turmeric kunciphisa umfutho izinqubo ukuvuvukala.
Iklabishi Cale ligcwele izakhi, ngakho zama ukufaka njalo kuyo Smoothies yakho.
Kulezi imbewu encane aqukethe eningi-omega-3 kubalulekile empilweni inhliziyo, plus aqukethe Antioxidants.
Umango - isakhi olukhulu ewusizo izithelo cocktail. I umango fibre ngokwanele namanzi, esiza zishukumisa emathunjini, ngaphandle Vitamin C likhona lapho
imifino eluhlaza - kungcono ingxenye enkulu kwanoma iyiphi isaladi noma fruit cocktail.
Uma uthanda amaswidi, zama ukudla yogurt ngesiGreki nge banana, uju kanye nesinamoni. Ngakho ungathola engxenyeni dessert amaprotheni. Ngaphezu kwalokho, i-yogurt ngesiGreki ungumthombo ezinhle probiotics.
Honey - ungumthombo yemvelo amaminerali ezifana bethusi, bensimbi, magnesium, manganese, i-phosphorus, i-potassium ne-zinc.
Lokhu spice uphelele kophudingi, ngoba kunciphisa ingozi sikashukela kanye nesifo senhliziyo.
Quality wokudla Amabha
Khetha amabha ubuncane izithako kusukela imikhiqizo yemvelo efana izinsuku kakhukhunathi.
Ngenxa isakhi esiyinhloko, ukwatapheya, guacamole sauce iyasiza, ecebile amafutha enempilo kanye fibre.
Lena ngenye yama-imikhiqizo eyinhloko yokudla Mediterranean, okuyinto umthombo omkhulu amafutha monounsaturated. Ifake uphethiloli amasaladi ezifana namafutha.
uviniga balsamic yimuphi umkhiqizo kwenza tastier. Kuyinto kilojoule, ngaphandle-ke has a Inkomba ongaphakeme glycemic, okwenza kube isixazululo ezinhle uma ufuna ukunciphisa umzimba.
Cherry iyindlela enhle Smoothies futhi kukuvikele ekuqongeleleni fat ngokweqile.
Lolu hlobo lwe-green kungase kungabi ethandwa kakhulu, kodwa kuyasiza kakhulu. Kwelinye ingxenye - umthamo double vitamin A.
Cottage shizi - kungcono kwalokho omkhulu for kwasekuseni, kwasemini noma dinner. Hlanganisa okusanhlamvu lonke isinkwa noma ingeze salads.
Lonke okusanhlamvu Muffin
okusanhlamvu lonke ukunikeza umzimba nge fibre, okuyinto kubalulekile ukuze kokudla esiswini enempilo. Ngosizo lwabo, uyozizwa umnyuziki eside, ngaphezu kwalokho, ngeke kube yinto engenzeka ukuthi cholesterol ephansi.
Amagilebhisi - lena kukho olukhulu isidlo noma kwasemini ukukhanya.
Yenza sandwich ngokolweni lonke isinkwa futhi i-tuna, ukuze uthole amaprotheni ngaphezulu.
Njengoba bekhula, umuntu uqala ukulahlekelwa yemisipha. Lokhu kuzosiza ukuvimbela umsebenzi futhi eyanele amaprotheni, okuyimali eningi kabi ubhontshisi!
Izakhiwo ezisebenzisekayo ikhalori rye isinkwa
Indlela ukuhlanza nezimfanzi ukupheka izitsha ezahlukene?
Uphayinaphu: indlela ukukhetha ngendlela efanele. Indlela ukucacisa ripeness uphayinaphu
50 amagremu of imvubelo - njengoba sesomile? Operational and olinganise
Bran isinkwa: umonakalo futhi inzuzo, ikhalori Ukwakheka
Yikuphi okungcono - "Aquaphor" noma "isithiyo"? Indlela ukukhetha isihlungi amanzi?
Leli dolobhana emangalisayo Kostenky Voronezh esifundeni
Zayn Malik: Biography of isithombe esisha intsha
Ingabe kuzuzisa ukwenza isikebhe ekudobeni izandla zakho?
Hibiscus: itiye noma rose
Nezimfumbe mayelana amaxoxo: Ukufunda ngokudlala
Izindleko zokukhiqiza kanye ngezigaba zabo